Imibala ephambili ye-10 ye-2017 ngokwePatone | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Le yimibala eli-10 ye-2017 ngokwePatone
Imibala ethandwayo njengoko kuyalelwa lihlabathi lefashoni, Zihlala zingumthombo olungileyo wokuphefumlelwa ukuba ufuna ukwenza iiprojekthi ezinombono obonakalayo ngakumbi kumhla wosuku lwangoku.
Ngethamsanqa, imibala kunye nesitayile sexesha ngalinye kutsalwe iinyanga ezintandathu kwangaphambili, Ukwenza kube lula ukucwangcisa uyilo lomsebenzi wexesha elizayo ngelixa uthatha ixesha "lokunyanga" izinto ezizayo. I-Pantone yenye yezitshixo kwaye le yimibala eli-10 yonyaka.
Kulo Iveki yeeNew York Kwiveki ephelileyo, iZiko leMibala yePantone lalinomzuzu wokukhetha uluhlu lwemibala eli-10 eyakuba ngabameli bentwasahlobo yonyaka ka-2017. Lo ngumxube wemibala engathathi cala, entle nenesibindi, ekhangeleka ngcono xa isetyenziselwa iibhloko zebala.
2 I-Primrose etyheli
3 ILapis eluhlaza okwesibhakabhaka
5 Isiqithi seParadesi
6 Ipale dogwood
8 I-yarrow epinki
ukhululekile kunye nokuzimela, iNiagara ngowona mbala ubalaseleyo kwintwasahlobo ka-2017.
Mthubi phezulu kakhulu esinobushushu obuninzi kunye namandla. Iintsuku zelanga kunye nomdlandla zezona zinto zibeka lo mthunzi otyheli ekunzima ukuwujonga kancinci.
ILapis eluhlaza okwesibhakabhaka
Con amandla kunye nokuzithemba, oluhlaza okwesibhakabhaka unomdla okhethekileyo.
Un bomvu ngokusekwe orenji into efanayo nolonwabo kunye nothando. Ngamandla amakhulu, le ithoni yomdlalo weqonga iya kukhuthaza kakhulu kuloo ntwasahlobo.
Un Luhlaza okwesibhakabhaka enomthunzi oluhlaza evumela ukuba wandise umgama kwaye unendawo yokuthambisa yetropiki.
Ipinki ekhululekile leyo ibandakanya ubumsulwa nokucoceka.
Phakathi ko tyheli noluhlaza yile ithoni ekhuthaza ukuhlola, ulinge kwaye uphinde uzivuselele.
Festive netropiki, I-yarrow epinki ngumthunzi opinki kakhulu.
Vusa ubomi obunempilo kwaye ukugqibelela kweyona mibala mihle yeparts ekhethiweyo yombala.
La ubunyulu bendalo izisa engqondweni lo mthunzi wombala.
Sikushiya ne iithoni ezimbini «umbala wonyaka».
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Le yimibala eli-10 ye-2017 ngokwePatone
Le app ikhethekileyo yabantwana ukuba baqale ukuzoba
Ukuqwalaselwa kolu qikelelo lwe-3D lunomdla olwenziwe eRomania